iqoqo ezethusayo uyafika akusho ukubuyela Ngaboleka imali?
トップページ ＞ 言語 ＞ ズールー語 ＞ iqoqo ezethusayo uyafika akusho ukubuyela Ngaboleka imali?
Ngo-movie ne-idrama le wezimali nendaba, yesehlakalo sivame ukubona enza iqoqo scary ngokumelene okweletayo.
kuze kube manje kulabo abangakaze imali ezikhungweni zezimali, kungase kube olubabazeka kakhulu ingxenye.
ngoba lolu hlobo qoqo, ingabe enziwe emhlabeni wangempela? Thina wafingqa indaba enemininingwane.
futhi ngokuyisisekelo akukho iqoqo, ezifana drama
umbolekisi, ukusongela kusukela into yokuqala ekuseni Banging umnyango ngamandla, kungase kube eziningi abantu abangekho sibe nomfanekiso, ezifana.
Nokho, Angininiki empeleni kuqala ukuthi ababolekisi ngemali ukwenza iqoqo esinjalo siyisivikelo. Uma
ngoba, liyalimaza isithombe inkampani yobambiswano uma into enjalo.
okubizwa ngokuthi iqoqo scary kuyinto, ukucabanga ukuthi labo ezenziwa ezezimali ebumnyameni ezifana ezigebengu ukuphathwa zaziyovama. Ngo
, nemali ababolekisi uyatjho enze onjani iqoqo, uma kwakungenzeka ukuba okweletayo ka senkokhelo esalibele, kusukela isikhungo sezezimali uzoxhumana nawe ifomu, ezifana incwadi yocingo kanye e-mail, ababekwa uphawu. +
kubaduni akukho ukuxhumana ngqo.
Nokho, uma ungathathi umuntu kanye nokuqokwa, kubuye kube into engavamile ukuthi ezifana umndeni emsebenzini uze ucingo.
Ngakho-ke, ukuze singathwesi uhlupho kumuntu wesithathu, ngokuqinisekile buyiselo usuku Zama ukuthatha isiqinisekiso.
iqoqo kukhona iziqondiso ukuthi isinqumo lizwe
Eqinisweni, uyazi ukuthi inkampani zezimali ngokwayo kwezinye izimo iqoqo, ezifana drama kungenzeka babe ukwephula umthetho? Lisetshenzisiwe khono art ukufeza abolekise futhi ukuboleka ka
imali, into le Imali Ukubolekwa Business Law, usumisiwe ubizwa ngokuthi "ukulawulwa iqoqo izenzo", yephula i kule izoba ngaphansi isigwebo.
isibonelo, inqobo nje uma kungekho isizathu, kunemithetho ukuthi kumele enze iqoqo okweletayo ngaphandle 8:00 pm 9 ekuseni kuya.
Ngamanye amazwi, ezifana Ngokuqhubeka ukuziba khetha oxhumana naye ku zababolekisa ngemali, inqobo nje okweletayo ngokwayo akukuniki isizathu, zababolekisa ngemali ingabe abavunyelwe ukuqoqwa emini njengoba ekuqaleni umsebenzi wakho.
Ngaphezu kwalokho, kukhona injongo lo mthetho ukuze sivikele ubumfihlo okweletayo, poster kanye izimpawu, yebo, uhambe ukuqoqwa izikweletu ngezwi elikhulu, isinyathelo noma Isuwa 'kungukuphula. Ngakho ukuthi iqiniso lokuthi izikweletu emhlabeni
akufanele ukukhanya, ababolekisi futhi kuyodingeka ukuba banake.
ukusho ukuthi yomthetho ngale ndlela, ekuqaleni izikhungo zikahulumeni Usizo lwezezimali Agency isungule ngemihlahlandlela iqoqo.
Ngakho, manje isenzo leso kuba wafayo, Shirezu angase isinyethelo ahoxise, zababolekisa ngemali bathi hhayi ukusebenzisa iqoqo ngokweqile.
i-nokuqoqwa kwezikweletu ejensi
izikhungo zezimali, kunokuba iqoqo ku-ndlu, kukhona indawo lapho isicelo ejensi nokuqoqwa kwezikweletu. Njengalapho
buyiselo babeye banamathela ngqo ngokubhala noma ngocingo ngaphezu uxhumane ifika, njll, libhekene ukufeza ukuqoqwa ithoni kancane elibuhlungu ngaphandle zezimali onguchwepheshe ekululameni.
ungathanda uqaphele lapha, ukukhwabanisa.
inkampani ukukhwabanisa ebesizenza nokuqoqwa kwezikweletu letinemakhono ubuciko muva futhi kudlangile. Ngaphezu
kwemali futhi, ngesimo contact, ezifana ukukhomba labo selikhokhe wokuqukethwe nyangazonke fixed kanye mobile, nokukhwabanisa ukuze isibalo esingavezwanga abantu. Ezinjalo njengoba
"inkontileka akuyona phezu okwamanje," "isibopho sokubuyisela livelile", ngoba la mazwi enziwe ngobuciko kushiwo ngokubhala, akukanciphi icala lokuthi ngabe ikhokhwe into abantu abazi ukuthi bayakhohliswa. Njengoba nje
engazazi, elikushoyo ukuziba ukuthi iyona engcono kunazo.
uma ukubuyiswa kwemali imisiwe, nakuba iqoqo scary awuveli enkampanini yezimali, ungasho yini ukuthi ezimweni eziningi kuncike iqoqo kusuka professional, ezifana nokuqoqwa kwezikweletu letinemakhono ubuciko.
uma kukhona ezibhaliwe noma ngocingo, njll iwukuba ngokushesha iwe, Zama ukufeza isinqumo ekuseni.
lapho enza izicathulo, kubalulekile ukwenza nanembuyiselo plan esicacile ngesikhathi esifanayo. Lapho
yayiyoba ikakhulukazi buyiselo eside, ukuba abe ifomu ukukhokha eziningi ozithandayo lemali, Zama ukunquma yokugcina buyiselo usuku kusengaphambili ngokwakho.
loan ezihlobene / ikhadi Kunconywe
Uma senkokhelo imisiwe, nakuba iqoqo scary awuveli enkampanini yezimali, ungasho yini ukuthi ezimweni eziningi kuncike iqoqo kusuka professional, ezifana nokuqoqwa kwezikweletu letinemakhono ubuciko.